Tombontsoa - Shineon Technology Co., Ltd.
Nampiasa ny fandrosoana phospor nandroso sy ny teknolojika fonosana, Shineon dia namorona vokatra feno andian-dahatsoratra LEDs feno spektrum. Ny teknolojia dia ahafahantsika manamboatra sy manamboatra ny SPD fizarana herinaratra ho an'ny LED fotsy, mba hahazoana loharano maivana tsara mety amin'ny fampiharana samihafa.
Ny fikarohana dia nanondro ny fifandraisana misy eo amin'ny lokon'ny loharano maivana sy ny tsingerin'ny sirkadian'olombelona. Ny fanarahana ny filan'ny tontolo iainana dia nanjary zava-dehibe kokoa amin'ny fampiharana hazavana avo lenta.
Ny halavan'ny ondran'ny UV dia avy amin'ny 10nm ka hatramin'ny 400nm, ary nizara roa ny halavan'ny halavany: teboka mainty uv curve an'ny (UVA) amin'ny 320 ~ 400nm; Taratra ultrafiolet erythema na fikarakarana (UVB) amin'ny 280 ~ 320nm; Sterilisation Ultraviolet (UVC) amin'ny tarika 200 ~ 280nm; Ny ovoza ultraviolet curve (D) amin'ny halavan'ny 180 ~ 200nm.
Shineon fampiasana teknolojia fonosana hermetika avo lenta, mamolavola andiana loharanom-pahazavana LED roa amin'ny fambolena. Ny iray dia andiana fonosana monochrome mampiasa chip manga sy mena (andiany 3030 sy 3535), ary ny iray hafa dia andiana phosphor faly amin'ny chip manga (andiany 3030 sy 5630). Ny andian-jiro Monochromatic dia manana tombony amin'ny fahombiazan'ny flux avo lenta
Amin'ny maha fitaovana nano vaovao azy, ny tavy Quant (QD) dia manana fahombiazana miavaka noho ny habeny. Ny endrik'ity fitaovana ity dia spherical na quasi-spherical, ary ny savaivony dia manomboka amin'ny 2nm ka hatramin'ny 20nm. QDs dia manana tombony betsaka, toy ny spektrum excitation malalaka, spektrum emission tery, hetsika Stokes lehibe, androm-piainan'ny fluorescent lava ary tsara
Gamut miloko avo
Miaraka amin'ny fivoaran'ny teknolojia fampisehoana, ny indostrian'ny TFT-LCD, izay nanjakazaka tamin'ny indostrian'ny fampisehoana nandritra ny am-polony taona maro, dia voasedra be. Ny OLED dia niditra tamin'ny famokarana betsaka ary nanjary be mpampiasa amin'ny sehatry ny finday avo lenta. Ny teknolojia vao misondrotra toa ny MicroLED sy QDLED dia eo an-toerana ihany koa.